Thwebula Pale Moon 28.8.2.1 Stable futhi Portable – Vessoft
WindowsInthanethiWeb browsersPale Moon
Ikhasi elisemthethweni: Pale Moon
I-Wikipedia: Pale Moon
Pale Moon – isiphequluli egxile ukwanda ngejubane futhi operation esitebeleni on the internet. Isici esiyinhloko isofthiwe ukusebenzisa izici eziningi Firefox namathuluzi. Pale Moon inikeza kokusebenza eziphawulekayo ngokukhubaza izici ezikhethekile isiphequluli ethandwa. Isofthiwe kwenza ukuze uthumele ezahlukene izilungiselelo, amabhukumaka nezandiso kakhulu kusukela isiphequluli Firefox. Pale Moon ine interface enembile futhi ibusa ezincane zesistimu imithombo.
Iyahambisana izilungiselelo kakhulu Firefox
Ukusetshenziswa sakugcina kwemithombo uhlelo
Thwebula Pale Moon
Amazwana ku Pale Moon
Pale Moon software ehlobene
Landa i-Master – imenenja yokulanda ukulanda izinhlobo ezahlukene zamafayela ku-inthanethi. Isoftware ingena esikhundleni semodyuli ejwayelekile yokulandwayo futhi inikeze isivinini sokulanda esandisiwe.
Lena isofthiwe esisizayo eklanyelwe ukwenza lula ukusetshenziswa kwegundane lekhompyutha kubantu abakhubazekile.